အသားအရေ ကို ထိန်းသိမ်းလှပလိုသူတွေကြား ခေတ်စားလာသော ဖြည့်စွက်ဓါတ်စာ – YANGON STYLE
အသားအရေ ကို ထိန်းသိမ်းလှပလိုသူတွေကြား ခေတ်စားလာသော ဖြည့်စွက်ဓါတ်စာ
ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအလိုက် အလှပရေးရာ ထိန်းသိမ်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေကလည်း ဆန်းသစ်လာတာလည်းရှိသလို ပိုမိုပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်လာတာကိုလည်းတွေရပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ သောက်ဆေးအနေနဲ့ မှီဝဲ သုံးစွဲမှု အများဆုံး နှစ်မျိုးကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ဒီနှစ်မျိုးကတော့ Glutathione နဲ့ Collagen ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Gluta ဆိုတာဘာလဲ ?
Gluta ဆိုတာကတော့- Glutathione ဆိုတဲ့ antioxidant တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အသားအရာင်ရင့်စေတဲ့ melanin ဓာတ်ကိုလျော့နည်းစေပြီး amino acid နဲ့ antioxidants တွေပါဝင်တဲ့ အတွက် အရေပြားထဲက မကောင်းတဲ့ အညစ်အကြေးတွေ၊ အဆိပ်အတောက်တွေကိုဖယ်ရှားပေးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာ အသားဖြူဆေးတွေ ၊ အသားဖြူနည်းလမ်းတွေ အများကြီးထဲမှာမှ Glutaဟာ effective ထိရောက်မှုမြန်ဆန်ပြီး ရေရှည်သုံးစွဲလို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလဲမရှိတဲ့အတွက် အရေပြားဆရာဝန်တွေ အသားဖြူဆေးအနေနဲ့ သုံးစွဲနေပါတယ် ။
Collagen ဆိုတာ ကရော?
Collagen ဆိုတာပရိုတင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပြီး နို့တိုက်သတ္တဝါတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာ သဘာဝအတိုင်းအများအပြားပါဝင်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အရိုးတွေရဲ့ ၉၀ % နှင့် အရေပြားရဲ့ ၇၀-၈၀% ကို Collagen တွေနဲ ့ဖွဲ ့စည်းထားပါတယ်။ ခန္စာကိုယ်အတွက် အရေးအရမ်းကြီး သလို အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်း ကုန်ခမ်းလာပါတော့တယ်။ အသားအရေအတွက် အလွန်အရေးပါလွန်းတဲ့အတွက် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အရေးအကြောင်း ဖြစ်ပေါ်မှုကို နှောင့်နှေးစေပြီး
လက်သည်း ခြေသည်း ဆံပင်တို့ကို ပြန်လည် အားဖြည့်ပေးခြင်း
Gluta ကိုမှီဝဲသည်ဖြစ်စေ Collagen ကိုမှီဝဲသည်ဖြစ်စေ နှစ်မျိုးပေါင်းကို သောက်သုံးသည်ဖြစ်စေ တန်ဆေးလွန်ဘေး ဖြစ်တာမို့ တစ်နေ့ကို ရေအနည်းဆုံး ၃ လီတာသောက်သုံးပေးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ ဖြူစင်ဝင်းပ ကျန်းမာကြည်လင်စေတဲ့အသားအရေကို အမြန်ဆုံးရရှိစေတဲ့ သောက်ဆေးနည်းလမ်းတွေအဖြစ် ခေတ်စားလျက်ရှိပါတယ်။